I-XCMG QY20B crane iphenduka ngokushesha futhi ihamba kancane
Isenzeko sephutha: I-Xugong QY20B crane ijikeleza ngokushesha futhi kancane. Incazelo yephutha: ngena esitimeleni bese ujikeleza ngokushesha ngenkathi ihamba kancane. Qaphela ukuthi izingcindezi ezinhlangothini zombili zehlukile ngesikhathi sokusebenza kwensimu. Ukuhlaziywa kwembangela yokwehluleka: 1: Isikulufa sokubekwa kw rotar ...
I-XCT25L5 ingalo ezintathu-ezine-nanhlanu ayinakwelulwa
Isimo sokungasebenzi kahle: I-XCT25L5 345 ingalo ehlangene ayikwazi ukunwebeka. Incazelo yephutha: I-XCT25L5 ayinaso isenzo lapho yelula izingalo ezimbili bese yelula izingalo ezintathu noma ezine noma ezinhlanu, futhi izingalo zombili zinwebeka ngokujwayelekile. Isizathu sokuhlaziya ukwehluleka: ukwehluleka kukagesi. Inkinga ...
I-XCMG QY25K5-QY50K (kufaka phakathi i-QY50B) ingalo yesibili ye-crane nezingalo ezintathu ezine ezinhlanu aziguquli inkomba.
Ukungasebenzi kahle: I-XCMG QY25K5-QY50K (kufaka ne-QY50B) ingalo yesibili ye-crane nezingalo ezintathu ezine ezinhlanu azishintshi ukuqondiswa. Incazelo yephutha: emotweni izingalo ezimbili zincipha ngokujwayelekile, izingalo ezintathu ezine ezinhlanu azikwazi ukushintsha i-telescopic. Ukuhlaziywa kwembangela yephutha: 1 ...